Izaqathi: ukutshala kanye nesondlo. Amathiphu Wabasaqalayo
Izaqathi iwumthombo owusizo carotene, siwuvumele ubuningi bayo kuphela pepper. Futhi izaqathe kukhona amavithamini B1, B2, K, C, i-folic acid, i-calcium, phosphorus, okusansimbi, i-iodine. Carrot juice kabanzi lisetshenziswe abantu ukuphulukiswa. Ngokwesibonelo, sikhonjiswa okuphuza ekwelapheni izifo zenhliziyo, izifo kwesibindi nezinso.
Uma unquma abe ingadi cottage, ungakhohlwa ukutshala izaqathi. Ukukhula lokumnakekela elula, kodwa isivuno qiniseka singaba usizo kabi. Izaqathi edliwayo engaphekiwe, okuthosiwe, abilisiwe, ukungezwa salads, amasobho, njll
isanqante ukutshala ubuchwepheshe kuyivumela ukuba bakhule endle futhi zokugcina. Nokho, ezimweni ehlobo kuba elula ukutshala izaqathe emibhedeni.
Izaqathi, ukutshalwa kanye nokugcinwa
Lolu hlobo lwe-zemifino ngaphezulu afune izinto ngenkani kwabanye mayelana nokukhula komnotho. Izaqathi abathanda izindawo libalele, futhi okubaluleke kakhulu, umhlaba esithambile. Ngenxa impahla yokugcina, likhula eside futhi flat. Iqiniso lokuthi ethile enhlabathini asifanele ukutshala isiko, uthi ukubonakala kwawo okumbi. Lungisa inhlabathi zokutshala Kwenziwa ekwindla. It ngempela bemba, bese kwenziwe umquba kanye humus.
Ngokukhethekile kufanele ikhokhwe ukulungiswa imbewu zokutshala. Iqiniso lokuthi imbewu isanqante aqukethe ukubunjwa yabo amafutha abalulekile kulolo gibe futhi musa ungamunca umswakama, kanjalo ezivimbela isiko ukuhluma. Ukuze ugweme lokhu, imbewu kuba manzi te emanzini kuze kuze avele amahlumela. Ngokuvamile kuthatha izinsuku ezingu-10.
isanqante ukutshalwa ku ekhanyayo kufanele kuqaliswe kusenesikhathi, ikakhulukazi uma ungenalo oyi-imila imbewu ke. izinombolo okulinganiselwe: 20-25 Ephreli izinhlobonhlobo ekuseni futhi 25 Kwangathi aprelyay-5 kamuva.
Ngaphambi kokuba atshale imibhede athambise ngempela, kokukhipha izimpande ukhula amatshe amakhulu. Zokuhlwanyela kungenziwa ngezindlela ezimbili. Ungakwazi umane uthele imbewu ku emiseleni, hhayi ukubukela ibanga elibahlukanisile. Kulokhu, lapho isanqante ukhule ube ukwenza thinning ukuze phakathi isitshalo ngasinye ibanga 20-22 cm. Ibanga phakathi emigqeni imayelana 12 cm. Indlela yesibili lapho imbewu kakade kutshalwe buqamama elinqunyiwe, ngenkathi kamuva, ngeke kudingeke thinning. Ngaphambi laying emseleni imbewu qiniseka uthele (ungasebenzisa isixazululo potassium permanganate abomvu), wenze humus kuzo akudingekile. Uma kungenzeka, embhedeni izaqathe kufanele embozwe ifilimu ukuze phakathi komhlaba, impahla ibe ibanga okuncane. Le filimu kungenziwa isuswe lapho avele amaqabunga yokuqala yeqiniso.
Ukunakekela izaqathe uvukile kuziwa ayakhala, ukususa ukhula, ehlambulula (uma kunesidingo), efaka umquba kanye control inkathazo. Izaqathi, ukutshala nokunakekela lapho kukahle, ukunikeza isivuno esihle. Yingakho kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi engakhuli, akadingi umswakama kanye nezakhi. Ukunisela ngokulinganisela, kuye ngokuthi izimo sezulu. Kufanele kuqashelwe ukuze izaqathe akuzona igcwele utshani, kungenjalo isivuno kuyoba eliphansi kakhulu. Hoeing ezweni, wenze kangcono ngemva ayakhala, kuthuthukisa izaqathe umoya-mpilo. Uma sikhuluma yokudla, khona-ke kufanele kwenziwe kabili isizini ngayinye. I sigqoka yokuqala wenziwa mayelana ngemva kwenyanga avele amahlumela, kanye sigqoka yesibili phezulu - cishe ngemva kwamasonto amabili ngemva kuqala. Isixazululo izakhi kungase kube kanje: 10 amalitha amanzi 1 isipuni nitrophosphate noma NPK. Ukunisela izinga 5 amalitha per 1 m2. Eduzane ukuwa usungaqala ukuvunwa. Izaqathi, ukulima kanye okwakukhona kulo ukunakekelwa kwesokudla, ngesikhathi esifanayo ahlinzeke timo letifanele okuyokunika isivuno esihle, ngisho noma endaweni encane. Uma into lokhu isiko angisithandi ke zonke "izimpande" kukhona Curves kanye ezincane, zibancishe izakhi kanye amavithamini.
Izikhukhukazi ka Adler esiliva. Breeding kanye nokugcinwa
Lesi sifo ikhukhamba powdery isikhutha namanye: nokwelashwa
Inyama amadada: ezikhulayo ekhaya
Kunganjani tie ukholifulawa? Thola izimpendulo kulo mbuzo
Ukushisisa ngaphandle igesi kanye nezinkuni, amapayipi kanye boilers
Inhliziyo ukuhlinzwa dlula: ukuthi kuyini, bangaki bukhoma. ukuhlinzwa Inhliziyo dlula: bangaki bukhoma emva kokuhlinzwa (ukubuyekeza, izibalo)
Samakhiwane omisiwe: ukusetshenziswa nokubaluleka amandla
Indlela yokuthola i-Dragon Rock e-Skyrim?
Ama-antibiotic Sumamed Izibuyekezo sihambisana okulindele.
UPetru No-Paul Cathedral, Kazan. UPetru No-Paul Cathedral: Indaba nezithombe
Gear worm. Umgomo we operation